Ji'oota sadii darbanitti dhaabbileen 16 to'annoo seeraa jala oolan - BBC News Afaan Oromoo
Kurmaana tokkoffaa bara kanaatti dhaabbileen gochaalee seeraan alaa dalagaa turan 166 adda kan bahan yoo ta'u, kunneen keessaa dhaabbileen seeraan alaa 136 sochii maallaqaa birrii biiliyoona jahaa ol raawwachusaanii Ministirri galiiwwan beeksiiseera.
Ibsa ministirri Galiiwwanii Aadde Adaanach Abeebee har'a miidiyaaleef kennanin, dhaabbileen kunneen waraqaa eenyummaa sobaatiin dhaabbata hundeessuu, nagahee sobaa raabsuu, gibira dhoksuufi meeshaan ykn tajaajilli gurguramu osoo hin jiraatiin nagahee gurguruu irratti kan hirmaatan ta'uu himan.
Dhaabbileen kun hojjetaas ta'e omisha hin qaban. Kan isaan qaban nagahee qofaadha jedhan Ministirri Galiiwwanii Aadde Adaanach.
Gochaa seeraan alaa diinagdee biyyattii miidhaa jiru kana keessatti lammiileen biyyaalee biroos hirmaachaa jiraachuu isaanii himame.
'Dubartoonni carraa dhaban malee oggansaaf umamaan gadi ta'anii miti'
Dhaabbileen biroon immoo dhaabbilee seeraan alaa irraa nagahee sobaa bituun gochaalee seeraan alaa garaagaraa raawwataa turan jedhan.
Dhaabbileen nagahee sobaa fayyadaman kunneenis kan kasaaran, ykn bu'aa kan hin arganne fakkeessuu fi nagaheewwan dhiyeessuun "osoo kasaarruu gibira kaffalaa jirra" jechun gibirri akka deebi'uf kan gaafataniidha.
Akka fakkeenyaatti dhaabbatni maqaa BMET jedhu qabuufi naannoo Sabbataatti argamu birrii biiliyoona 1.5 kasaareera jechuun gibira kaffaluu dhiisuu qofa osoo hin taanee deebii gaafataa ture jedhan.
Hammeentaan gibiraa dhaabbatichi mootummaaf hin kaffalles birrii Miiliyoona 670 akka ta'e himan.
Kana malees, dhaabbileen nagahee sobaa dhiyeessan 16 to'annoo seeraa jala oolaniiru jedhan. Dhaabbilee kunneen hordofuunis qaamni nagahee sobaa maxxanse ni to'atama jedhan.
Ministirri galiiwwanii Aadde Adaanach Abeebeen hojii seera kabachiisuu kana ejjansii tajaajila odeeffannoofi tika biyyaalessaa fi poolisii federaalaa waliin ta'un hojjetaa akka jiran dubbatan.
Dhaabbileen nagahee bituun gibira isaanii dhoksan 166 kunneen keessaa 136 sochii maallaqaa birrii biiliyoona jahaa ol raawwataniiru.
Kana malees dhaabbileen kunnen tokkon tokkoon isaanii giddugaleesaan bittaafi gurgurtaa birrii miiliyoona 51 raawwataniiru jedhameera.
Gama biraatin ministeerichi ji'oota sadan darbanitti galii birrii biiliyoona 57.3 sassaabuu isaatu himame. Kunis karoora qabame walin yeroo madaallamu 102% dha.
Gibirri kaffalame kunis kakk'umsa kaffaltoota gibiraan kan kaffalame ta'uun cimina ta'uu dubbatan.
Kaffaltootni gibiraa bifa kurmaana darbe kanaan fedhii fi kakka'umsa ofiitin gibira kaffaluun jijjiirama guddaa ta'uus himan.
Kanaafis "kaffaltoota gibiraa kunneen ni galateeffanna" jedhan.
Hojiileen seera kabachiisuu hojjetaman, barnootni dhimma gibiraa irratti kenname fi kotannoon hojjettootaa sababoota milkaa'inaa akka ta'an himameera.
Ji'oota sadeen darbanittis kaffaltoota gibiraa 4,900f barnootni latamuu isaatu himame.
Addee Adaanach Abeebee: 'Dubartoonni carraa dhaban malee oggansaaf umamaan gadi ta'anii miti'